Yini impahla esetshenziselwa phansi igumbi lokulala? - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Yini impahla esetshenziselwa phansi igumbi lokulala?
Okokuqala, ukuqina phansi kokhuni
Akunakusho ukuthi, ukubeka phansi izinkuni okuqinile bekulokhu kuvame kakhulu emizini, kepha abantu abaningi bayadangala ngenxa yentengo ephezulu. Eqinisweni, lapho sithenga, akumelwe sibheke inkinga yamanani kuphela, kodwa futhi sicabangele izinzuzo zako; okuvelele kakhulu kufanele kube Kungumsebenzi wayo wokuvikela imvelo. Uthathwa ngqo emvelweni, ngaphandle kwemisebe, i-formaldehyde nezinye izinkinga. Okwesibili, kufudumele ebusika futhi kupholile ehlobo, kuqinile, kuyamelana nemithi, futhi kunempilo ende. Ungakubukeli phansi lokhu, kunganciphisa izindleko zokubuyiselwa esikhathini esizayo.
Umphumela wokubuka nawo muhle kakhulu, unikeza umuzwa omuhle futhi omuhle, kepha ngaphandle kokulahlekelwa ukusondelana kwawo.
Noma ngabe ngokhuni oluqinile oluphansi phansi noma oluyisisekelo lamamitha, banento eyodwa efanayo, okungukuthi, aqukethe amagesi ayingozi afana ne-formaldehyde, ngoba isiteyithimenti sakhiwo sakhiwo sidinga ukuxubunwa ngezendlalelo ze-glue, futhi ne-glue iqukethe izakhi eziningi zamakhemikhali, ezingcolisa kakhulu imvelo. Imikhiqizo enjalo egumbini lokulala izoba nomthelela empilweni yakho. Ngemuva kwakho konke, sichitha isikhathi esithe xaxa egumbini lokulala.
Okwesithathu, bamboo lokhuni phansi
I-bamboo kanye nokhuni flooring nayo idume kancane eminyakeni yamuva nje. Inezinzuzo zokuvikelwa kwemvelo, ezempilo, ukufiphala kwemvelo, ukumelana nomswakama, nokuphikiswa kwenundu. Inokusebenza kwezindleko eziphakeme .. Abangani abathanda amakha we bamboo bangayikhetha!
Okwesine, ukubekelwa phansi kwamalambu
Ukushona phansi ngamalambu akuvikeleki ngokwengeziwe.
Yini impahla esetshenziselwa phansi igumbi lokulala? Okuqukethwe okuhlobene